Warshad Soosaara Qaybi Birta - Shiinaha Soosaarayaasha darbiyada Birta, Qaybiyeyaasha
SL-8014 Laser Cut Astaanta Asturnaanta Qalabka ahama Qalabka Qurxinta Qalabka Birta Beerta Qaybiye Qurxinta Qaababka Shaashadda Birta Aluminium
Qaybaha birta waxaa loo soo saaraa laba qaab oo kala duwan. Mid waa in la isticmaalo kala-goynta tuubbada biraha, habka kale waa in la isticmaalo saxan bir ah si loo sameeyo goynta leysarka. Markaad dooratid tuubo bir ah inaad sameyso, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan tixgelinno dhumucda.
Haddii aad leedahay meel ballaadhan ama qorshe furan, qolalka kala qaybiyayaasha - oo sidoo kale loo yaqaan qaybo ama shaashadaha Shoji - waa hab quruxsan oo fudud oo lagu kala saari karo ama loo kala sooci karo 2 qaybood oo ka mid ah meeshaas ama in la siiyo meel quruxsan, diiradda qurxinta Qol. Beddel ahaan, kala-qaybiyaasha qolka ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu bixiyo aag gaar loo leeyahay meel bannaan haddii kale, laga soo baaro aag aan nabad ahayn, ama laga ilaaliyo dabka furan. Aad u kala duwanaansho, kala qaybsanayaasha qolku waxay xal fudud u helaan dhibaatooyin badan oo reerka ka jira, waxayna u muuqdaan kuwo dufan
SL-8012 Nadiif ah ahama birta qolka casriga ah qaybiye / shaashadda shaashadda darbiga qaybta qurxinta.
Waxaan indha indheyn ku sameynay waxa aan aaminsanahay inay yihiin qaar ka mid ah kuwa ugu tayada fiican uguna fiican qeybiyeyaasha qolka halkaas. Waxaan helnay qeybiyeyaal bir ah / shaashado dabka; Qaybaha qolka qaabka Shōji, Qaybaha qolka alwaax dhaqameedka ah, Qaybaha Sawirada Sawirada Sawirada Qaybaha Qurxinta Qurxinta. Liiskayagu wuxuu ku siin doonaa dhiirigelin nooc kasta oo guri ah.
Shaashadda Khaaska ah ee Laser Cut Qalabka Birta ah ee Qurxinta Qalabka Birta ah Qaybaha qurxinta
Qeybinta darbiga birta ah waxaa loo sameeyay jarjar laser si loo qurxiyo qaabka kore, dhadhan aad u qurux badan iyo jacayl. ka dibna midabkeedu yahay PVD midab casaan leh leh, waa hubaal inuu yahay qayb ka mid ah farshaxanka weyn ee gurigaaga.
Qolka Jiifka ahama Qolka jiifka ee darbiga Qaybta Qaybta Birta Birta ah Nashqadeeyaha Naqshadaha Qurxinta Laser Qurxinta Gudaha
Qeybinta darbiga birta ah waxaa lagu kala firdhiyaa cabir kala duwan oo ah tuubooyin godan oo bir ah, ka dibna dusha sare ayaa lagu dhammeeyaa burush iyo midab matte ah, fudud iyo kooban.
Iyada oo tikniyoolajiyad alxanka-Xoog badan.
Haddii kale, qol-qeybiyahaas waxaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo aag gaar loo leeyahay meel bannaan oo haddii kale la furan yahay, laga xiro aag aan loo baahnayn ama laga ilaaliyo aag furan. Waa wax aad u badan, kala qaybsanaanta qolku waxay xal fudud u tahay dhibaatooyinka badan ee guriga haysta, iyo qurxinta!
Qalab Casri ah oo Casri ah oo Qalab Qalabka Birta ah
* Isu imaatin fudud iyo muuqaal xarrago leh.
* Naqshadaha naqshadaha ayaa la heli karaa.
* Lahabeyn karo
* Daahfurnaan wanaagsan, diidmo iyo adkaansho.
Qolka qolka qolka biraha ee shaashadda qurxinta ee birta ah ee birta ah ee birta ah ee qolka jiifka ah ee casriga ah
Qeybinta darbigan birta ah waxaa lagu kala jaray tuubooyin fidsan oo bir ah, ka dibna dusha sare ayaa lagu dhammeeyaa Vacuum ion midabaynta, oo leh qaab naqshad joomatari ah oo fiican, kooban oo iswaafajinaya.
Waxay caan ku tahay qolka fadhiga ama hudheelka naqshadeynta casriga casriga ah.
Qaybaha toosan ee gacanta, Qeybta jaranjarada jaranjarada, Ahama cuskado, Cuskado, Dahaarka ahama Steel wiishka, Saxanka Saldhig gacmeed,